लोलिता मेरी लोलिता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लोलिता मेरी लोलिता
२०७० फाल्गुन २, शुक्रबार ११:२२ गते
लोलिता मेरी लोलिता ! म लोलिता खोजिरहेछु । मेरो जीवनको गरिमा लोलिता ! मेरो यात्राको प्रकाश लोलिता ! हो, म लोलिताको प्राप्तिमा मात्र पनि अन्धकार चिरेर अघि बढ्न सक्छु । लोलिताको आभास मात्रले पनि मलाई शिखर आरोहण गर्ने युग चेतना दिन्छ ।
तपाईहरु भ्रममा नपर्नोस्, यो भ्लादिमिर नावोकोभको नभएर मेरो अभिव्यक्ति हो, अर्थात् यो भ्लादिमिरको नभएर मेरो लोलिता खोज्ने प्रयत्न हो । लोलिता यति व्यापक छे कि उसलाई भ्लादिमिरमै मात्र कैद रहन दिनु लोलिता स्वयंका लागि घातक कुरो हो । यसलाई चाहिँ मैले स्वीकार्नु पर्छ, लोलिताको गर्भधारण गर्ने श्रेय भने नावोकोभलाई जान्छ । अर्थात्, ऊ नै लोलिताको आमा पनि हो र लोलिताको बाबु पनि । तर, लोलिताको समग्र अस्तित्व नै भ्लादिमिरले आपूmमा केन्द्रित गर्न खोज्छ भने म निर्धक्क भन्न सक्छु, योचाहिँ उसको मूर्खता हुनेछ । मलाई विश्वास मात्र होइन, पूर्ण विश्वास छ कि भ्लादिमिर यति सचेत भने पक्कै छ, आपूmले गर्भधारण गरेको लोलितालाई कोही अरुले (जन्मको सम्पूर्ण श्रेय उसलाई दिएर) अझ परिष्कृत गर्न खोज्छ भने उसको विरोध रहँदैन, नरहनु पर्ने हो । हो, त्यही प्रयत्नबाट अभिप्रेरित भएर म जीवनको प्रकाश लोलितालाई खोज्दैछु ।
तपाईहरु मान्नोस् या नमान्नोस्, यो मेरो प्रयत्न लोलिताको पुनव्र्याख्या हो । भ्लादिमिरले जन्माएको लोलितालाई म (सायद मेरो अहं देखिँदैन भने) पुनर्जन्म दिने कोसिसमा संलग्न छु । तपाईंहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, कसैले गर्भधारण गरिसकेको लोलितालाई तैँले पुनव्र्याख्या गरेर लोलिताको पुनर्जन्मको श्रेय कसरी पाउँछस् ? ठीक भन्नुभयो, तर म लोलिताको श्रेय लुट्ने अभिप्रायले भने अघि बढेको होइन, तपाईंहरुले स्वीकार्नुपर्छ । तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ कि लोलिता तपाईंहरुका लागि अनि मेरो लागि के हो र मैले यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भले तपाईंहरुको जीवनमा कति मह¤व राख्छ । हो, तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ लोलिताको सूक्ष्मता अनि उसको आयामलाई, लोलिताको फैलावट अनि उसको समग्रतालाई । ल त, यदि हामी गन्थन मात्र गरिरह्यौँ भने मैले उठाउन खोजेको विषय नै अपमानित नभइरहला भन्न सकिँदैन । म चाहन्नँ, यति व्यापक तथा यति सूक्ष्म रहेको लोलिताको प्रसंग यतैकतै विलीन भएर जाओस् ।
नरिसाउनोस् है, म तपाईंले लुकाएर राखेको एउटा रहस्य उद्घाटन गर्न चाहन्छु । कुरा के भने यदि तपाईं बैँसलाई कैद गर्ने सपना देख्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईंको अँगालोभरिभरिको सपनामा लोलिताले पर कतैबाट चियाएको, पर कतैतिर खेलेको अनि हाँसेको यावत् कुराहरु आएको हुनुपर्छ, एउटा कोमल अनुहारमा खोपिएको नरम ओठहरुका साथमा । लोलितालाईं छुने कोसिसमा तपाईंका औँलाहरु अनायास नशा पिएझैँ काँपेका, ओठहरु अचानक सुस्तसुस्त संगीतको धुनजस्तै उद्वेलित भएका यी कुराहरु तपाईंले चाहेर पनि बिर्सन सक्नुहुन्न । यदि तपाईं लोलितालाई पूर्ण रुपले नकार्नुहुन्छ र लोलिताको कुनै अर्थ नभएको कुरामा विश्वस्त बन्दै जानुभएको छ भने तपाईं निरीह अनि चेतनाशून्य यथार्थ बाँचिरहनुभएको छ । तपाईंले भुल्नुहुँदैन कि लोलितालाई लिएर सयौँ काव्यहरु लेखिएका छन्, अनि लेखिएका छन् सभ्यताका गीतहरु । इतिहासका आयतनहरु लोलिताको स्पर्शमात्रले पनि खुम्चिने र फैलने गर्छन् । हो ! तपाईंले बिर्सनुहुँदैन । तपाईं अझै पनि मेरो गोरूको बा¥है टक्का भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने यस्तो स्थितिमा निश्चित छ, तपाईंको जीवनलाई निर्जीव वस्तुले पनि जिस्क्याउने साहस राख्छ ।
यदि तपाईं वर्तमान समयलाई पर छोडेर स्मृतिहरुमा हराउँदै जानुभएको छ भने त्यो विगतको सामीप्यताले तपाईंलाई पक्कै पनि केही उत्तेजित पारेको हुनुपर्दछ । त्यो स्मृतिको परिधिभित्र बाँधिएर खेलेको, हाँसेको, सुखदुःखका कुराहरु गरेको, माया र प्रेमको परिवेशमा एकअर्कोलाई गहिरोसँग चिन्ने प्रयत्न गरेको तपाईंले भुल्न चाहेर पनि भुल्न सक्ने कुरा होइन । भनाइ नै छ, “वर्तमानको पीडा, यातना अनि वेदना बिर्सने एकमात्र साथी विगतसँगको आत्मीयता नै हो ।” कैले परोक्ष रुपमा तपाईंको अघि कोमल मुस्कानको उपहार लिएर त कैले अपरोक्ष रुपमा तपाईंको स्मृतिमा कुनै रुखमा सुगन्धले ओतप्रोत भएको लहराझैँ बेरिएको दृश्य तपाईंले बिर्सन सक्छु भनेर बिर्सिएको अभिनय गरे पनि त्यो सिङ्गो विगत कहाँ ओझेल हुन्छ र ! कहाँ निस्तेज हुन्छ र स्मृतिको त्यो समग्र अस्मिता । यदि तपाईं विगत र स्मृतिको विपक्षमा उभिने मनस्थिति लिएर बस्नुभएको छ भने तपाईं वर्तमान अनि भविष्यसँग पनि त्यत्तिकै शत्रुता मोलिरहनुभएको छ, यो कुरा नभुल्नुहोस् । तपाईं विपक्ष भएर उभिएकाले वर्तमान तपाईंसँग रिसाएको अनि भविष्य तपाईंको शत्रु भएको कुराले पनि यो कुरा स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ कि तपाईं समयको गर्तमा भासिँदै जानुभएको छ । तपाईंको भएको अस्तित्व पनि अस्तित्वहीन हुनेछ र तपाईं मलामी नपाएको मुर्दाको रुपमा खुला सडकमा आफ्नै लासलाई चिथोरिरहेको हुनुहुनेछ । म स्पष्ट तरिकाले भन्न सक्छु, यसका लागि मसँग धेरैधेरै प्रमाणहरु छन् । यदि यस्तै हो भने कोही यो संसारदेखि टाढा, इष्टमित्र, नातागोतादेखि पर, परिवार अनि आपूmदेखि नै एक्लिएको र यावत् मूल्य अर्थात् अस्तित्व र मान्यताका सन्दर्भहरुमा घृणित, निन्दनीय, स्पर्शहीन वस्तुका रुपमा कन्टेनरमा मिल्किएको हुनेछ ।
यदि तपाईं समयलाई बन्धनमा बाँधेर लोलितालाई पूर्ण रुपले तिरस्कार गर्ने चेष्टामा मग्न हुनुहुन्छ र लोलिताको रुपलाई पिँजडामा थुनेकोमा बाजी जितेको भ्रममा गर्व गर्नुहुन्छ भने अनि बैँस जीवनको सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने विश्वासमा निष्ठावान् हुनुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि सौन्दर्य, सभ्यता अनि विकासको आगमनलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने दाउपेच खेल्न थाल्नुहुनेछ, यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नै म देख्दिनँ । तर, यहाँनेर तपाईंले लगाउन खोजेको प्रतिबन्ध हास्यास्पद हुँदैन र, जहाँ यौवनको शिखर बाधाहीन तरिकाले आरोहण गर्दै रहेका छोरी, नातिनीहरुको मायाले पगाल्दछ । तपाईं उनीहरुलाई देखेपछि कसरी स्मृतिको खेलमा मग्न हुनुहुन्छ अनि विगतको सम्मोहनले कसरी तपाईंलाई लठ्ठ बनाउँछ । मेरो प्रश्न छ तपाईंसँग, यो लोलिताको व्यापकता नभए के ? यदि तपाईं वादविवाद गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ र आफ्ना छोरीहरु, आफ्ना नातिनीहरु कहिले पनि लोलिता हुन नसक्ने कुरा प्रमाणित गर्न चाहिरहनुभएको छ भने म के भन्छु भने एक त तपाईंले यिनीहरुलाई देखेपछि पर्ने गरेको मनोविज्ञानको प्रभावलाई तत्कालै स्वीकार्नु पर्छ । किनभने, मसँग एउटा ठूलो प्रमाण छ, त्यो के भने यसरी प्रभाव पर्नु पनि कतै न कतै लोलिताको अंश प्रकट हुनु नै हो, चाहे त्यो मनोविज्ञानकै रुपमा नै किन नहोस् । तपाईंले यी लोलिता हुनै सक्दैनन् भन्ने जुन विचार अघि सार्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसमा मेरो एउटा जोडदार तर्क के हुनेछ भने यी लोलिता नै हुन्, किनकि केही समयपछिको समय भनेकै यी लोलिता हुने समय हुन् । लोलिता बन्ने प्रयत्नबाट न तपाईंले रोक्न सक्नुहुन्छ, न म नै रोक्न सक्छु यिनीहरुलाई । यदि तपाईंले यिनीहरुलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने तपाईंको बुढेसकाल बुढ्यौलिँदै गएका छोरी, नातिनीहरुको उपस्थितिले क्षणक्षणमा, पलपलमा सन्त्रस्त भैरहने छ ।
लोलिता मात्र बैँस होइन, न अँगालो मात्र नै हो लोलिता । लोलितालाई यौवनभन्दा पर वसन्तका पूmलहरुमा पनि भेट्न सकिन्छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने । लोलितालाई झमझम परेको वर्षा ऋतुको सम्झनामा पनि पाउन सकिन्छ, यदि तपाईं लोलितालाई सही अर्थमा बुझ्नुहुन्छ भने । एउटा फक्रक्क फक्रेको गुलाफलाई पानी परेको समयमा देख्नुभएको छ ? हो, त्यही सौन्दर्यले अभिभूत भएर लोलिता हाँस्छे । एउटा पूर्ण चन्द्रमा ओढेको शरद्को रातलाई भेट्नुभएको छ ? हो, त्यही रात ओढेर लोलिता निदाउँछे, कलिलो किरणको स्वप्निल आयतनमा नुहाएर ।
तपाईं कल्पना गर्नुहोस् एउटा माझीको, जो डुंगा खियाएर सागरको छातीमा लहरहरु नाप्दै अघि बढिरहेछ । तपाईं चाहनुहुन्छ भने त्यो परको प्रतिबिम्बलाई लोलिताको उपमा बनाएर चाहेसम्म पिउन सक्नुहुन्छ र मीठो स्वादको प्राप्तिमा तपाईं आफ्नो परिवेशको क्यानभासमा लोलितालाई चित्रित गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले कहिलेकाहीँ जिन्दगीको परिधिमा नौलोनौलो आभास भएको स्पर्शलाई छुनुभएको होला । मलाई विश्वास छ, तपाईंले छुनुभएको छ अनि आफैँ सामेल हुनुभएको होला, आफैँलाई नै थाहा नदिएर ।
एकछिन कल्पना त गर्नुहोस्, यो तपाईंको स्थिति कति लोमहर्षक र कति रोमाञ्चक छ ! तपाई यसलाई जे नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ । चाहे तपाईं यसलाई कविताको स्वादसँग तुलना गर्नुहोस्, लोलिता कविता पनि हो र ऊ कविताको स्वाद भएर आइदिन्छे, तपाईंको आँगनमा । चाहे तपाईं यसलाई फूलसँग तुलना गर्नुहोस्, लोलिता पूmल पनि हो र ऊ मयूरझैँ नाच्दै मन्दाकिनीको घुम्टो ओढेर पूmलको केस्राकेस्रामा सौन्दर्य भएर आइदिन्छे । चाहे तपाईं यसलाई प्रेयसीको अस्तित्वसँग तुलना गर्नुहोस्, लोलिता मोहिनीको रुप लिएर तपाईंको प्रेयसीका रुपमा आइदिन्छे । अनि, तपाईं यसलाई सपना भनेर परिभाषित पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लोलिता वासन्ती–लताको महकमा माधवी बनेर तपाईंले सोच्नुभएको सपनामा पनि सदाबहार प्रकृति भएर मुस्कुराउँछे । वास्तवमा यो तपाईंमा भर पर्ने कुरो हो कि तपाईंले लोलितालाई कुन परिवेशले बाँध्न खोजिरहनुभएको छ, अनि कति आयतन लिएर नाप्न खोजिरहनुभएको छ । अब तपाईं नै भन्नुहोस्, के लोलिताको व्यापकतालाई भ्लादिमिर नावोकोभमै कैद रहन दिनु ठीक होला त !